Kitra – “Ballon d’or 2015” : namoa-tsampona indray ny Fifa | NewsMada
Nanaotao foana indray ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa), omaly. Nivoaka tao anatin’ny tranonkalan’ity andry voalohan’ny kitra eran-tany ity mantsy fa i Lionel Messi hahazo ny “Ballon d’or 2015”.
Zava-doza ny nataon’ireo tomponandraikitra eo anivon’ny federasioan iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa). Namoaka ny anaran’ny mpilalao hahazo ny “Ballon d’or 2015” tao amin’ny tranonkalam-pifandraisany mantsy izy ireo. Ny anaran’ilay Arzantin, Lionel Messi, no niseho tao amin’izany. Toy izao ny soratra hita tao, «All winners of the Fifa Ballon d’Or award 2015» : Lionel Messi na adika malalaka hoe : ireo mpandresy amin’ny “Fifa ballon d’or : Lionel Messi”. Ny nahavariana ny mpanara-baovao, fotoana fohy monja nivoahan’ilay filazana, nisy namafa tao anatin’io tranonkalan’ny Fifa io ilay soratra.
Hatreto aloha, tsy mbola nandrenesam-peo ireo tomponandraikitra eo anivon’ny Fifa, mahakasika ilay izy. Mizarazara ny hevitr’ireo mpitia baolina kitra, taorian’iny tranga iny. Tao ireo nilaza fa efa vita mialoha izany ny safidy. Ny hafa indray niteny fa faminganana an’i Lionel Messi tsy hahazo izany amboara izany intsony ny nanaovana iny.
Marihina nefa fa mbola amin’ny alatsinainy, 11 janoary ho avy izao, vao ho fantatra izay handrombaka izany mpilalao mendrika ho an’ny taona 2015 izany. Raha tsiahivina, i Cristiano Ronaldo, Messi ary Neymar, hiady izany “Ballon d’or 2015” izany.